काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई मतदान केन्द्र भित्र फोटो खिच्न दिने मतदान अधिकृत प्रदीपकुमार शर्मा रुपाखेतीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
भट्टराईले मतसंकेत गरेको मतपत्रको फोटो खिची सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि आयोगले मतदान केन्द्रमा फोटो खिच्ने दिने मतदान अधिकृतसँग चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
शुक्रबार भएको मतदान भट्टराईले गोरखाको पालुङटार नगपालिका खोप्लाङ (क) अन्नपूर्ण मावि केन्द्रमा मत खसालेका थिए । उक्त केन्द्रमा मतदान अधिकृत प्रदीपकुमार शर्मा रुपाखेती रहेका थिए ।
रुपाखेतीलाई डा. भट्टराईले मतसंकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरेको विषयमा आयोगले ‘के कसो भएको हो ? उहाँले के कसरी गोप्य मतसंकेत गर्ने स्थानमा क्यामेरा वा मोबाइल लग्नुभयो ? निज डा. बाबुराम भट्टराईले फोटो लिने सामाग्री साथ लग्दा के कति कारणले सम्बन्धति मतदान अधिकृतले फोटो लिने सामाग्री लानबाट निजलाई रोक्नु भएन ?’ भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
गठबन्धनमा इमान्दारिता भएन- बाबुराम भट्टराई
गोरखा । जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनमा इमान्दारिता नभएका कारण निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेको बताएका छन् । जिल्लाको चुनावी समीक्षा गर्न आज यहाँ
गठबन्धन सरकारको बजेटले गोरखालाई उपक्षा गर्यो- भट्टराई
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि गोरखा जिल्लालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको
म पनि ६८ वर्ष पुग्दैछु, तर वृद्धभत्ता लिन्न- बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले सरकारले बजेटमार्फत वृद्धभत्ताका लागि उमेरहद घटाएको भन्दै असहमति जनाएका छन् । आइतबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्‍मा
गोरखा । चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न गत ६ वैशाखमा गोरखा आइपुगेका जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए, ‘गठबन्धन आवश्यकता र औचित्यता हेरेर वडावडामा पनि त